Maxamed Cali Ameeriko oo loo diiday inuu galo Baladweyne – STAR FM SOMALIA
Safiirkii hore Somaliya u fadhiyay dalka Kenya, Amb. Maxamed Cali Nuur (Ameeriko), ayaa waxaa maanta loo diiday in gudaha uu u galo Xarunta Gobolka Hiiraan Ee Magaalada Baladweyne.
Danjiraha, ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa uu ku sugnaa Magaalada Cadaado Ee Gobolka Galgaduud, iyadoona uu saakay safarka xagga dhulka ah uu ugu amba baxay Magaalada Baladweyne, inkastoo si kedis ahayd looga horjoogsaday.
Danjiraha oo safar ku sii maray Magaalada Matabaan, ayaa waxa uu shir jaraa’id ku qabtay Deegaanka Beergadiid, xilli ay halkaasi ku soo dhaweeyen xubno ka tirsan Maamulka Baladweyne.
Danjiraha, ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in safar dhinaca dhulka ihi uu ku yimaado Gobolka Hiiraan, xilli uu sheegay in safarkiisan uu qayb ka yahay socdaalkiisa uu ugu magac-daray (Socdaalka Nabadda), isla-markaana uu ku faraxsan yahay in uu taggo Magaalada Baladweyne.
Xilli gawaaridii uu la socday ay u jiheysteen wadada aadda Baladweyne, ayaa waxaa si lama fillaan ahayd loogu horgooyay mid ka mid ah gawaarida dagaalka, waxaana loo sheegay inaanu taggi karin Magaalada Baladweyne.
Murun iyo dood xoogan ka dib, ayaa waxaa loo sheegay in amar ka soo baxay Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Hiiraan, C/fataax Xasan Afrax loogu diiday inuu galo Xarunta Gobolka Hiiraan.
Amb. Ameeriko oo dhacdadaasi si xoogan kaga carooday, ayaa u mahadceliyay xubnihii ka tirsanaa Maamulka Baladweyne, isagoona safarkiisii u weeciyay dhinaca Magaalooyinka Guriceel & Dhuusamareeb.
Warar aan la xaqiijin, ayaa sheegaaya in Amb. Ameeriko loogu diiday inuu Baladweyne galo, suurta galnimada inay salka ku hayso Dhismaha Maamulka Gobolada Hiiraan & Shabeellaha Dhexe.
Ameeriko, ayaa bishii hore ee July bilaabay Safarkiisaan Socdaalka Nabadda, iyadoona uu booqasho ku soo kala bixiyay Magaalooyinka Cadaado, Galkacyo, Garoowe, Boosaaso, Qardho, Kismaayo & Baydhabo.